6. Uyini umehluko phakathi kwe-Standard Umnotho, Premium, Ibhizinisi kanye Nomphathi kwiTrenitalia 7. Ingabe kukhona okubhaliselwe iTrenitalia
Ngo 2005, le Frecciarossa 1000, Kwethulwe umugqa wesitimela osheshayo weTrenitalia. Ijubane lelo le Frecciarossa 1000 Ifika kuma-300km ngehora.
Isitimela esinejubane elikhulu iTrenitalia yisevisi exhuma enyakatho iye eningizimu nasempumalanga nentshonalanga e-Italy nase-Italy neSwitzerland, France, Austria, futhi eJalimane.
Inkonzo yezitimela zaseTrenitalia iyadingeka kakhulu. Trenitalia Base train ticket can be exchanged and modified without limitation and the Economy Standard ticket can only be modified once before the train departure date. You cannot exchange or refund the other Trenitalia tickets, kepha kunezithangami ku-inthanethi ongathengisa ngazo ithikithi lakho laseTrenitalia. Gcina isincomo sesitimela se Ukuhamba kweTrenitalia iwukubhuka uma uqiniseka ngohlelo lwakho lokuhamba.
Izintengo zamathikithi eTrenitalia ngokwesibonelo zingaqala ngo- € 21 ngesikhathi sokunyusa kodwa zingafinyelela ku- € 97 ngomzuzu wokugcina. Amanani amathikithi eTrenitalia kuya ngesigaba osikhethile futhi nansi itafula lokufingqa lamanani aphakathi neklasi ngalinye leRoma-Naples / Rome – Milan / Milan – UFlorence uhambo:
Uma kukhulunywa ngamathikithi wesitimela eTrenitalia pricing, amanani ajwayele ukwehluka kaningi. Okunye ukukhushulwa kukuvumela ukuthi uthole amathikithi ashibhile wesitimela, kepha ngezinsuku zokugcina ngaphambi kokusuka, amanani aya ngokwanda ngakho-ke uma uthanda ukuhamba ngokushelelayo, I-Trenitalia ingeyakho!
Yini umehluko phakathi komnotho ojwayelekile, Premium, Ibhizinisi, kanye Nesiphathimandla kwiTrenitalia?
Kukhona iPhasi ye-Italy, kepha kunconyelwa kuphela njengenketho eshibhile uma uhlela ukuqeqesha ukuhamba ngaphezulu 14 izinsuku, okubhaliselwe kuvumela ukuhlola i-Italy ngesitimela ngokudlula okukhethekile. Bangu 3 amazinga wokuphasa atholakalayo: Easy, Comfort, kanye no-Executive futhi ungakhetha inombolo yohambo olususela kulo 3 ukuze 10 bese ukhetha uhlobo lwesitimela kusuka kuFrecce enejubane elikhulu kuya ekuhlanganyeleni nase-EuroCity.
I-Trenitalia ihlanganisa lonke i-Italy, Nokho, iziteshi ezinkulu zikazwelonke iMilan, Rome, Venice, Naples, eTurin, Bologna, Geneva, Florence, futhi Verona. Bangu 11 iziteshi zomhlaba jikelele: 5 Iziteshi zezitimela zaseTrenitalia eSwitzerland futhi 6 iziteshi eFrance kanti ezimbalwa e-Austria naseJalimane naseCroatia. Ngakho-ke kusobala ukuthi ubungahamba kahle futhi ngokushesha udabule ama-European amahle futhi ubabaze ukubukwa kwe-Italy ngaphandle kokulahlekelwa yilutho!
Rome Termini ingesinye seziteshi ezinkulu zezitimela eYurophu. Itholakala ngqo ukusuka kubhavu kaDiocletian eRoma yasendulo. Umnyango wokuya kwisiginali usuka kuPiazza dei Cinquecento. Bangu 29 amapulatifomu ehhovisi lamathikithi wesitimela seTheritalia neTrenitalia esesikhungweni sesiteshi.
Yini okufanele ngiyilethe eTrenitalia?
Trenitalia I-FAQ yokuthi ngingaya kuphi neTrenitalia?
Amathikithi esitimela wokubhuka kanye nokugibela iTrenitalia akukaze kube lula. Ungathenga kalula ithikithi lakho leTrenitalia ngomzuzu wokugcina ku-inthanethi kuya phezulu 1 ihora ngaphambi kokusuka kwesitimela. Okokugibela, okudingayo yiphasiphothi futhi ukwethula ikhodi ye-PNR (6-ikhodi yamadijithi). Ukucacisa, ikhodi ye-PNR ithunyelwa kuwe nge-imeyili yokuqinisekisa yokubhuka nge-e-ticket. Awudingi ukuphrinta ithikithi lesitimela ngaphambi kwesikhathi ngoba liyatholakala kuselula yakho futhi linamathiselwe ku-imeyili yokuqinisekisa, futhi isilawuli sesitimela singaqinisekisa ithikithi lakho ngegama ngegama lesimo esibi kakhulu.
Izitimela zeTrenitalia zine-cafe-bar ekhethiwe enikezwe iziphuzo nokudla okulula. Imenyu ifaka amasamentshisi, ama-chocolate we-chocolate, Ungadla, imishayo chocolate, ikhofi, itiye elinoshokholethi, netiye futhi ngemuva kwalokho ungadla futhi uphuze kule ndawo yokudlela yesitimela yokudlela noma uthathe lokho okuthengile ukubuyisela esihlalweni sakho. Uma uhamba ngebhizinisi, Premium, noma isigaba sokuqala ungakhetha isiphuzo samahhala sokwamukela kusuka kukho 9 iziphuzo ezitholakalayo noshukela, elungisiwe, or gluten-free snack. On all Trenitalia trains, kukhona izikhala zamandla eduze kwesihlalo sakho.
Lapho uthenga amathikithi akho eTrenitalia kusengaphambili, ungajabulela I-inthanethi ye-WiFi yamahhala on all Trenitalia frecciarossa type trains and classes.